Mashruuca Sivas Ankara YHT ee horumarka | RayHaber
[08 / 01 / 2020] Gaadiidka TCDD 263 Natiijooyinka Shaqaalaynta La Shaaciyay!	Shaqooyinka
[08 / 01 / 2020] Xaaladda ugu dambeysay ee Daraasadaha Ankara Sivas YHT	06 Ankara
[08 / 01 / 2020] Mashruuca Casriyeynta ee Zamun Thick Railway	55 Samsun
[08 / 01 / 2020] Mashaariicda Gaadiidka ayaa Noloshu Ku Fududay Kocaeli	41 Kocaeli
[08 / 01 / 2020] Imamoglu: Istanbul oo luminaysa Kheyraadka Kheyraadka Biyaha oo Cusub ayaa loola jeedaa Is-dilid	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMashruuca Sivas Ankara YHT ee Horumarka
27 / 08 / 2019 06 Ankara, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
sivas ankara yht project ka socda
Guddoomiyaha Gaadiidka Turkiga Mustafa Albayrak, Sivas, Ankara, sababao dhaqaale awgood, sida shaqada tareenka xawaaraha ku socda ayaa joogsanaysa wasakheynta macluumaadka bulshada, laakiin wararka xanta ah sax ma ahan waxayna dowladda u qoondeysaa gunnada lagama maarmaanka u ah tareenka xawaaraha sare, ayuu yiri.
In kasta oo aysan jirin wax maal gashi ah meelo badan, Albayrak wuxuu sheegay inaysan wax dhibaato ahi ka dhicin tareenka xawaaraha dheereeya u dhexeeya Sivas iyo Ankara. Waxaan rajeyneynaa in tareenka xawaaraha dheer ee suga Sivaslılar uu kulmi doono sanadka soo socda. Ujeeddadeena kuma lihin inaan qaadno rakaab keliya tareenka xawaaraha sare leh. Waxaan rajeyneynaa in magaaladeena ay noqon doonto magaalo warshadeyn ah iyadoo la keenayo alaabada ceeriin ee laga soo qaado wadamada yurub ilaa Sivas waqti gaaban.
Albayrak wuxuu tilmaamay in tareenka xawaaraha sare uu aad muhiim ugu yahay dib ucelinta tahriibka .. Hızlı tareenka xawaaraha sare aad ayuu muhiim noogu yahay maadaama Sivas ay tahay magaalo warshadeed. Shaqadu si wanaagsan ayey u socotaa. Waxaan si dhow ula socona shaqooyinka. Waxaan aad ugu nugul nahay inay raacday shaqooyinka la xiriira tareenka xawaaraha sare ee la qorsheeyay inuu ku yimaado Sivas ilaa 2005. Daraasadaha la qorsheeyay looma fulin karin wadahadalada dhulka dartood. Waxaa jiray dood ku saabsan xarunta tareenka xawaare sare ku socda.
Halkaa marka ay marayso, waxaan dhumucdeynay Sannaddeena 5 sidaa darteed saldhigga tareenka ayaa yimid iyo halkan. Wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo tareen xawaare sare leh Konya. 2 waxay biloowday duullimaadyo u dhexeeya Ankara iyo Konya inta lagu jiray sanadka. Booqashooyinka gobollada kale waxay bilaabeen markaan ka wada hadalnay arrimo qaarkood. Sannadkan, shaqada u dhaxaysa Yıldızeli Sivas ayaa dhammaan doonta. Shaqada Kırıkkale Elmadağ si dhakhso leh ayey u socotaa. Ma jiraan wax joogsiyo ah oo ka socda goobaha dhismaha. La'aanta carqaladaha sanadkan, tareenka xawaaraha ku socda wuxuu imaan lahaa Sivas. Sannadkan maanu gaadhi kari lahayn tareenka xawaaraha-dheer, laakiin waxaan u maleynaynaa in tareenka xawaaraha-sare uu imaan doono Sivas sannadka soo socda. Tareenka xawaaraha sare ku socdaa waa raaxo iyo raaxo badan. Thanks to tareenka xawaaraha sare ku socda, sidoo kale waxaa jira waxqabadyo dalxiis. Dadku waxay u yimaadaan Sivas si ay u arkaan taariikhda qurxinta taariikheed. (sivasmemleket)
Ankara, Yozgat iyo Sivas khadka tareenka xawaare sare ku socda…
Suuqyada Suuq Bacuumka ah ee YHT Suuqa Shaqada ayaa ka shaqeeya
Doodaha saldhiga Bursa YHT waa wada…
Apaydın: "Shaqada qadka Ankara-Sivas YHT waa mid si daran…
Loogu talagalay Kireynta Tareenka Sare ee Xawaaraha…
Yozgat's Mashruucyada Mashruucyada Mashruuca iyo Mashruuca Madaarka
Tareenka ugu horreeya ee Mashruuca Tareenka Dar Es Salaam-Morogoro…
Goorta la furayo tareenka xawaaraha sare ku yaal Ankara Sivas
Goorma ayaa Ankara Sivas YHT furi doonaa?
Sivas Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara
Goorma ayuu Sivas Ankara YHT furi doonaa?
Mashruuca YHT Sivas-Ankara
Madaxweynaha Gaadiidka Turkiga Sen
Iran, Turkey u dhaxaysa New TransAsia Express tareenka
Xalka Shuruudo Joogto ah oo loogu talagalay Weerarada Daadka